Diet For Over 70 People - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အသကျ ၇၀ ကြျော အဖိုးအဖှားတှအေတှကျ အစားအသောကျပုံစံ
အသကျ ၇၀ ကြျောလာတာနဲ့ အဖိုးအဖှားတှဟော အစားအသောကျ ကွေးမြားလာတတျပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ “ဟိုဟာမစား သညျဟာမစား ငါးခွောကျဖုတျနဲ့ညား” ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါဆို ဘာတှေ ဖွဈနိုငျပါသလဲ?
၁။ အာဟာရ မမြှတခွငျး
အသားတှေ အသီးအရှကျတှေ မစားတဲ့အခါ အဖိုးအဖှားတှမှော အာဟာရ ခြို့တဲ့လာတတျပါတယျ။
၂။ အသားမစားသဖွငျ့ အသားဓာတျခြို့တဲ့ခွငျး
အသားဓာတျမရလို့ ကွုံလှီတာ၊ ဗီတာမငျခြို့တဲ့တာတှေ အလှနျအမငျးမြားပါတယျ။ အသားဓာတျအတှကျ ကွကျဥ တဈနတေ့ဈလုံးလောကျ စားစခေငျြပါတယျ ။
၃။ အသီးအရှကျ မစားသဖွငျ့ ဝမျးခြုပျခွငျး
ဝမျးခြုပျတဲ့အခါ ဝမျးကို ညှဈသှားနရေလို့ လိပျခေါငျးထှကျတာတှေ၊ အူကတြာတှေ ဖွဈနိုငျတဲ့အပွငျ အခနျ့မသငျ့ရငျ စမဉျြးပိတျပွီး အူပိတျတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ မပေါ့သငျ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဖိုးဖိုးဖှားဖှားတှေ ဝမျးမမှနျတော့ဘူးဆိုရငျ သင်ျဘောသီးလို မနျကညျြးဖြျောရညျလို ဝမျးနူးစာလေး နညျးနညျးကြှေးပေးတာ သငျ့လြျောပါတယျ။
၄။ အရပွေား ခွောကျသှခွေ့ငျး
အသီးအနှံတှေ မစားပေးတဲ့အခါ ဗီတာမငျစီ နဲ့ အမြှငျဓာတျ ခြို့တဲ့လို့ အရပွေားတှေ ပါးလာပွီး ထိခိုကျပှနျးရှ လှယျလာတတျပါတယျ
၅။ အရိုးတှေ မခိုငျတာ
အသကျကွီးလာရငျ နှားနို့လေး သောကျပေးတော့ အရိုးကနျြးမာရေး အဆငျပွတောပေါ့။
၆။ အဆီအဆိမျ့ ရှောငျပါ။
စားသငျ့တာကြ ကြှေးမရပမေယျ့ သူတို့ စားခငျြတာကြ တားမရပါဘူး။ အဲဒီတော့ အရမျးခြိုတဲ့ မုနျ့တှေ၊ အခြိုရညျတှေ၊ အဆီအဆိမျ့တှတေော့ တတျနိုငျရငျ တားပေးပါ။ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ဆိုးစပေါတယျ။
၇။ လကျဖကျရညျ၊ ကျောဖီကို အလှနျအကြှံ မသောကျပါစနေဲ့
လူကွီးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ လကျဖကျရညျ ကွိုကျကွပေမေယျ့ သူတို့နှလုံးက နစေ့ဉျ လကျဖကျရညျသောကျတဲ့ဒဏျကို မခံနိုငျပါဘူး။ ရငျတုနျတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ မသောကျပဲ နခေိုငျးရငျလညျး ရနျသူဖွဈမယျလေ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ လကျဖကျရညျ နောကျနနှေ့ားနို့ လောကျ တိုကျနိုငျပါတယျ။
အသက် ၇၀ ကျော် အဖိုးအဖွားတွေအတွက် အစားအသောက်ပုံစံ
အသက် ၇၀ ကျော်လာတာနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေဟာ အစားအသောက် ကြေးများလာတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် “ဟိုဟာမစား သည်ဟာမစား ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ညား” ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?
၁။ အာဟာရ မမျှတခြင်း
အသားတွေ အသီးအရွက်တွေ မစားတဲ့အခါ အဖိုးအဖွားတွေမှာ အာဟာရ ချို့တဲ့လာတတ်ပါတယ်။
၂။ အသားမစားသဖြင့် အသားဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း
အသားဓာတ်မရလို့ ကြုံလှီတာ၊ ဗီတာမင်ချို့တဲ့တာတွေ အလွန်အမင်းများပါတယ်။ အသားဓာတ်အတွက် ကြက်ဥ တစ်နေ့တစ်လုံးလောက် စားစေချင်ပါတယ် ။
၃။ အသီးအရွက် မစားသဖြင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်း
ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါ ဝမ်းကို ညှစ်သွားနေရလို့ လိပ်ခေါင်းထွက်တာတွေ၊ အူကျတာတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် အခန့်မသင့်ရင် စမျဉ်းပိတ်ပြီး အူပိတ်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မပေါ့သင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ ဝမ်းမမှန်တော့ဘူးဆိုရင် သင်္ဘောသီးလို မန်ကျည်းဖျော်ရည်လို ဝမ်းနူးစာလေး နည်းနည်းကျွေးပေးတာ သင့်လျော်ပါတယ်။
၄။ အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်း
အသီးအနှံတွေ မစားပေးတဲ့အခါ ဗီတာမင်စီ နဲ့ အမျှင်ဓာတ် ချို့တဲ့လို့ အရေပြားတွေ ပါးလာပြီး ထိခိုက်ပွန်းရှ လွယ်လာတတ်ပါတယ်
၅။ အရိုးတွေ မခိုင်တာ
အသက်ကြီးလာရင် နွားနို့လေး သောက်ပေးတော့ အရိုးကျန်းမာရေး အဆင်ပြေတာပေါ့။
၆။ အဆီအဆိမ့် ရှောင်ပါ။
စားသင့်တာကျ ကျွေးမရပေမယ့် သူတို့ စားချင်တာကျ တားမရပါဘူး။ အဲဒီတော့ အရမ်းချိုတဲ့ မုန့်တွေ၊ အချိုရည်တွေ၊ အဆီအဆိမ့်တွေတော့ တတ်နိုင်ရင် တားပေးပါ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ဆိုးစေပါတယ်။
၇။ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီကို အလွန်အကျွံ မသောက်ပါစေနဲ့
လူကြီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် လက်ဖက်ရည် ကြိုက်ကြေပေမယ့် သူတို့နှလုံးက နေ့စဉ် လက်ဖက်ရည်သောက်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ပါဘူး။ ရင်တုန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မသောက်ပဲ နေခိုင်းရင်လည်း ရန်သူဖြစ်မယ်လေ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ လက်ဖက်ရည် နောက်နေ့နွားနို့ လောက် တိုက်နိုင်ပါတယ်။